Inona no tokony ho fantatra momba ny fitsaboana Proton Therapy any California Protons
FAQ momba ny homamiadana any California Protons
FAQ momba ny fiantohana fiantohana
Manam-pahaizana amin'ny fitsaboana proton. Passion amin'ny fikarakarana marary.
Any San Diego, ivon-toeram-pitsaboana any California Protons Cancer Therapy Center no lohalaharana amin'ny fitsaboana, ny fikarohana ary ny bioteknolojia. Nandritra ny fanandramana niainana am-polotaona maro lasa izay, ny dokotera dia manolo-tena amin'ny fikarakarana ambaratonga fitsaboana tsy manam-paharoa. Raha ny marina dia efa nanasitrana marary efa ho 20,000 XNUMX niaraka tamin'ny fitsaboana proton izy ireo.
Inona no mampiavaka an'i California Protons Cancer Therapy Center amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana homamiadana hafa?
California Protons dia iray amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana proton roa ao amin'ny fanjakan'i California. Ny ivonay dia manasongadina ny fitaovana proton an'ny taranaka fahatelo farany, izay isan'ny haitao mandroso indrindra azo trandrahana - fitsaboana proton beam proton beam. Ny ekipantsika mpitsabo dia iray amin'ireo manam-pahaizana indrindra amin'ny fitsaboana proton eto amin'izao tontolo izao. Betsaka ny mpitsabo ao amin'ny foibe no nanam-bintana niofana tamin'ny ivon'ny proton voalohany eran'izao tontolo izao izay nisokatra tamin'ny taona 1990 ary nitondra ireo traikefa an-taonany maro ho an'ny teknolojia mandroso indrindra. Noho ny vokatra tsara sy ny fitomboan'ny isan'ny ivon-toeran'ny proton, dia mitombo hatrany ny isan'ireo mararin'ny homamiadana misafidy fitsaboana proton isan-taona.
Ho fanampin'izay, California Protons dia nanambatra an'izany rehetra izany niaraka tamin'ny gantry 360 degre feno mihodina izay manana sary volumetric Cone-Beam CT izay ahafahantsika mampifanaraka ny vatan-kazo amin'ny fivontosana - manome tena avo lenta ankoatra ny avo lenta.
Manao ahoana ny filan'ny ankizy any amin'ny California Protons Cancer Therapy Center?
Ny dokotera sy ny mpiasa dia miara-miasa akaiky amin'ireo ekipa ao amin'ny hopitaly Rady Children's Hospital mba hamoronana fitsaboana manokana hamaly ny filana tsy manam-paharoa an'ireo marary fitsaboana proton zaza. Ao amin'ny toerana misy anay, ny marary zaza tsy ampy taona dia manana vavahady misaraka, ny efitranony fitsaboana manokana, miampy ireo mpikambana ao amin'ny ekipa malina izay miasa mafy hanamaivanana ireo fanahiana sy tahotra izay tsapan'ny ankizy maro mandritra ny fitsaboana.
Mila dokotera mpitsabo ve aho mba hotsaboina any California Protons?
Maro amin'ireo marary no tonga mivantana any California Protons mba hitsaboana azy. Indraindray ny mpanome fiantohana marary dia mila referansa fitsaboana, fa ny California Protons tsy mila iray. Na izany aza, amin'ny tranga Medicare na PPO dia tsy ilaina ny fanondroana anarana. Ny ekipa fiantohana dia misy hamaly fanontaniana ary hanampy amin'ny fitetezana ireo làlana fiantohana sy fiantohana.
Firy ny efitrano fitsaboana anao any amin'ny California Protons Cancer Therapy Center?
California Protons dia manana efitrano fitsaboana dimy ary toeram-pitsaboana proton voalohany ao amin'ny firenena nanolotra teknolojia proton-beam proton amin'ny efitrano fitsaboana rehetra. Noho ireo efitrano marobe dia afaka mitsabo marary marobe isika mandritra ny andro, ary afaka manomboka fitsaboana ny marary raha vantany vao vita ny drafitra fitsaboana azy ireo.
Ny California Protons ve manampy ny marary amin'ny trano onenana? Ahoana ny amin'ny fanohanana ara-pientanam-po?
Ho an'ny olona mandeha ivelan'ny tanàna, California Protons dia nifanarahana tamina trano fandraisam-bahiny marobe izay manolotra fihenam-bidy ho an'ireo marary mandritra ny fijanonany. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpanohana, toy ny mpiasanay ara-tsosialy, dia manampy ny marary sy ny fianakaviany hitady trano sy fitaterana, hahita vondrona mpanohana ary hiatrika ny zava-tsarotra rehetra mitranga. Ny mpitsabo sakafo dia miasa amin'ireo marary mba hamolavola drafitra sakafo hanampiana azy ireo hahatsapa ny tsara indrindra mandritra ny fitsaboana ary handrindrana ireo vondrona mpanohana amin'ny fiaraha-miasa mandritra ny fitsaboana. Mianara bebe kokoa momba ny fandrindrana ny fitsidihanao Eto.
Aiza no ahazoako fampahalalana bebe kokoa momba ny Ivotoerana Therapy any California Protons Cancer Therapy?
California Protons dia manana ekipan'ny Advocates ho an'ny marary izay afaka mamaly fanontaniana maro amin'ny telefaona. Mandritra ny krizy COVD19 sy ny fialofana amin'ny toerany, dia manolotra fakan-kevitra sy fanendrena telemedicine amin'ny alàlan'ny kaonferansa video izahay. Misy lisitra fiandrasana ihany koa ho an'ireo liana amin'ny fitsidihan'ny dokotera ny toeram-pitsaboana raha vantany vao hesorina ny protokolota lavitra. Ary, fitsidihana virtoaly ny Center dia misy amin'ny tranokalanay. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady www.californiaiaprotons.com, na miantso (858) 433-4886.
Vetivety aho dia tonga eo afovoanao? Manana lisitry ny fiandrasana ve ianao?
Ny fifampidinihana amin'ny mpitsabo dia misy matetika ao anatin'ny 1 herinandro. Satria afaka mihetsika haingana ny homamiadana indraindray, indraindray dia azo alamina ao anatin'ny 24 ora ny fanombanana ireo tranga maika.
Mety aminao ve ny fitsaboana proton? Hadihadio ireo safidinao.